Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiye Ku-xigeenka oo kala qayb galay shirka waxgaradka Koonfur Afrika
Gudoomiye Ku-xigeenka oo kala qayb galay shirka waxgaradka Koonfur Afrika
Dr Maxamed Ismaaciil Cumar ayaa khadka telefoonka ugu warbixiyay wax garadka u dhashay Ogaadeeniya ee kusugan magaalada Johannesburg ee Xarunta JOKA.
Shirka oo si heersare ah maamulka JOKA u soo qababnqaabiyay ayaa ka dhacay magalada JHB gaar ahaan xaafada Foresburg, waxaana kasoo qaybgaley odayaasha dhaqanka iyo culumaa,u diinka ayaa lagu furay maxadaro diini ah fadiiladu sh Maxamed Nadiir. waxaana warbixin waafi ah kasoo jeediyay G/X JWXO Mudane Dr M Ismaciil Cumar. oo kudheeraada xaalada halganka iyo caqabadaha horyaala xukuumada daalan ee EPRDF.
Sidoo kale gudoomiyaha JOKA Mudane M dahir ayaa kawarbixiyay xaalada Jaaliyada iyo go,aamadii dhawaan kasoo baxay shirwaynihii 10 aad. Wuxuu gudoomiyuhu qeexay rugta JOKA oo loosoo badalay magaalada JHB iyo hawlha uu doonayo in ay iska kaashadaan wax garadka .
Shirkan oo uu daadihinayay Hogaanka Abaabuka iyo Arimaha Ururka ee JOKA Mudane Abwaan Yuusuf ayaa waxgaradkii soo xaadiray dhiiri galiyeen inay shaqada lalaba jibaarayaan isla markaana ay diyaar u yihiin in ay hiil iyo hooba lagarab istagaan Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeniya ee maanta utaagan Xoraynta Wadankooda hooyo.
Shirku wuxuu bogaadiyay isbadalka JOKA iyo xarunta cusub waxayna ku amaaneen hawlwadeenka Jaaliyadda in ay marwalba talaabooyinka horumarinta JOKA tahay mid meeshii larabay kasoo baxda. Shirkan ayaa la isla taabtaabtay sidii looga gaashaaman lahaa dhaqdhaqaaqa cadawga ee wadankan iyo sidii loo fashilin lahaa wax kasta oo kala qaybsanaan ku keeni kara Bulshada.
Ugu danbayntii wuxuu shirku canbaareeyay xukuumada liidata ee TPLF falalka waxshinimada ah ee ay marwalba ku burburiso waxkasta oo bulshadu doonayso in ay ku gaasho aayo katashigeeda, wuxuu sigooni ah farta ugu fiiqay shirka afduubkii dhawaan loo gaystay madaxdii ONLF ee wadanka Kenya laga afduubay waxayna ku tilmaameen wax garadku in uu yahay falkaasi mid fal fulaynimo ah iyo kutumashada qaraarada caalamig ah ee ku saabsan ixtiraamka qaranimada dawladaha iyo dariswanaaga.
Wax garadku waxay balan qaadeen in ay Ethiopia marnaba aamini doonin lana joogo wakhtigii laga ilbixi lahaa wax kasta oo Ethiopia doonayso in ay ku cimri dheeraysato
Gumaysidiid – H/WFF JOKA 2014